लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लब च्याम्पियन – WicketNepal
लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लब च्याम्पियन
Wicket Nepal, २०७३ चैत्र १३, आईतवार ००:००
विकेटनेपाल -भैरहवा, १२ चैत ।
रुपन्देही क्रिकेट संघको आयोजनामा जिल्ला सदरमुकाम भैरहवास्थित सिद्धार्थ रंगशालामा शनिबार सम्पन्न शशिकान्त–सकुन्तला बर्मा टि–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल खेलमा वेष्टर्न क्रिकेट क्लब बुटवललाई ७ रनले हराउँदै लुम्बिनी खुकुरी क्रिकेट क्लब बेलहिया च्याम्पियन भएको छ । जितसँगै उसले नगद रु. ५० हजार र ट्रफी प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता वेष्टर्नले नगद रु. २५ हजार र ट्रफी प्राप्त गरेको छ ।
टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको खुकुरीले निर्धारित २० ओभरको खेलमा १९.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै १ सय ३३ रनको योगफल तयार गरेको थियो । उसका लागि रोहित पौडेलले ६५, सविन शाक्यले २६ र विजय सुनारले १४ रनको योगदान दिए । बलिङका वेष्टर्नका विक्रम भुसालले ५, शौरभ खनाल र धिरज शाहीले समान २-२ विकेट लिए ।
जवाफी ब्याटिङमा मैदान छिरेको वेष्टर्नले निर्धारित खेलमा ८ विकेटको क्षतिमा १ सय २६ रन बनाई हार व्यहो¥यो । उसका लागि राहुल कुमारले ३५, भुवन पाण्डेले १८, शौरभ खनाल र जगत क्षेत्रीले समान १५-१५ रन बनाए । बलिङमा खुकुरीका शाह आलम र लालबहादुर अधिकारीले समान ३-३ विकेट लिए । खेलको म्यान अफ द फाइनल खुकुरीका रोहित पौडेल घोषित भएको रुपन्देही क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रशान्त विक्रम मल्लले जानकारी दिए ।
त्यस्तै प्रतियोगितामा वेष्टर्नका शौरभ खनाल उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान घोषित भई नगद ५ हजार र ट्रफी प्राप्त गरे । खुकुरीका शाह आलम बेष्ट बलर घोषित भई नगद ५ हजार र ट्रफी हाता पारे भने देवदह क्रिेकट युनिट देवदहका सुरज दराई उत्कृष्ट खेलाडी हुँदै नगद १० हजार र ट्रफी हात पारे । प्रतियोगिताका विजेता तथा उपविजेता खेलाडीहरुलाई जिल्ला खेलकुद विकास समिति रुपन्देहीका अध्यक्ष योग गुरुङले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए ।
प्रतियोगितालाई अमेरिका निवासी विवेक बर्मा अन्सु बर्मा र अल्का बर्माले आफ्नो स्वर्गीय आमा बुवाको नाममा स्पोन्सर गरेका थिए । स्वर्गीय शशिकान्त बर्मा रुपन्देही जिल्लाको क्रिकेट खेलको विकासमा अम्पायर तथा खेलाडीको रुपमा योगदान पु¥याउने व्यक्तित्व मानिन्छन् भने स्वर्गीय सकुन्तला बर्मा रुपन्देही जिल्लाको महिला नेतृ थिइन् ।